मलाई ढोकाटोलमा 'फुलेको फुल' भनेर चिन्छन् | Janaakash
Home / अन्तर्वार्ता / मलाई ढोकाटोलमा ‘फुलेको फुल’ भनेर चिन्छन्
Janaakash Media ११ मंसिर २०७५, मंगलवार १९:०१	अन्तर्वार्ता Leaveacomment 252 Views
हरेन्द्र श्रेष्ठ अध्यक्ष उपभोक्ता मञ्च नेपाल
मानिसको जन्म भएपछि मृत्यु अवश्य हुन्छ । तर वाचुनजेल मानिसले समाजका लागि गरेको योगदान भने बाचि रहेको हुन्छ । त्यस्तो योगदान गरेर इतिहाँस बनाउन थोरै मानिसहरुले मात्र सकछन् । त्यस्तै एक समाजसेवा तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा त्यतिबेलाका नेवि. संघका संस्थापक केन्द्रिय सदस्य हरेन्द्र श्रेष्ठ त्यति मात्र नभएर नेपाल अधिराज्यभरी ७३ वटा जिल्लामा समेत जिल्ला समितिहरु रहेको उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष भएर उपभोक्ताहरुको हकहितका निम्ति निरन्तर काम गर्दै आउनु भएका व्यक्तित्व उहाँको प्रजातन्त्रको लागि लड्दा २०२४ सालमा जेलजीवन समेत निर्वाह गर्नुभएका सर्घर्षशील, समाजसेवी तथा त्यागी व्यक्तित्व उहाँसग हामीले यस अङमा कुराकानी गरेका छौं ।
० तपाइको बाल्यकाल कस्तो थियो ?
म २००२ सालमा जन्मेर यही ढोकाटोलमा हुर्केको हुँ । सानै उमेरमा विशेष गरेर त्यतिबेला विद्यार्थीकालको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रजातन्त्रको उत्थान गर्न संगठित हुने र मेहनत गरेर उच्च शिक्षा हाँसिल गर्नुपर्छ भन्ने थियो त्यही क्रममा २०१७ सालमा राजनीतिक कु भयो देशमा प्रजातन्त्र हरण भयो । त्यसको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ संघर्षका लागि संगठित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो त्यसमा म अग्रपंक्तिमा थिए । त्यसकारण प्रहरीको निसाना मतिर परिरहेको थियो म नेविसंघको संस्थापक भएर संगठन निर्माण गरेका थियौं र २०२४ सालमा त्यही संगठन खोलेको भनेर त्यतिबेलाका एकतन्त्रीय शासनले म लगायत शेरबहादुर देउवा, मार्सजुलुम शाक्य, रामचन्द्र पौडेललाई भद्र जेलमा हालेको थियो र ७ महिना जेलजीवन समेत बितेको थियो । बाल्यकाल हुँदै युवा हुँदा मेरो बाल्यकाल काठमाडौंको बासिन्दा भएर पनि संघर्षमय भएको थियो ।
० त्यतिबेला जेलको अवस्था कस्तो थियो ?
हामी प्रजातन्त्रका लागि लड्ने धेरै साथीहरु जेलमा हुनुहुन्थ्यो र प्रजातन्त्रका लागि लडेका व्यक्तित्वहरु ह्ुन भनेर त्यहाँ रहेका अन्य कैदीहरुले पनि हामीलाई राम्रो मान मनितो गर्थे धेरै साथीहरु थियौं प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको लागि यो यो तरिकाले आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर भित्रै योजनाहरु बनाउँथ्यौ र पछि जेलबाट छुटेपछि पनि हामीले त्यही जेलमा बनाएको योजना अनुसार काम गर्यौँ त्यसले देशमा ठुलै हलचल ल्याइदियो र २०४६ सालमा त महत्वपूर्ण आन्दोलनको लागि हामी नेविसंघका संस्थापकहरु एक ठाउँमा बस्यौं र पुन जेलमा बनाएको योजनाहरु लागु गर्नुपर्छ भन्नेने भयो । त्यतिबेलासम्म हामीले २०४३ सालमा नै उपभोक्ता मञ्च नेपाल गठन गरेका थियौं । त्यही उपभोक्ता मञ्चको प्रयासले आठ बामगठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन एक ठाउँमा ल्याउने काम उपभोक्ता मञ्च नेपालले गरेको थियो । त्यही योजना अुनसार २०४६ सालको आन्दोलन गर्यौ त्यो जेलमा बनाएको योजनाले नै प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको हो ।
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना सँगसँग्ै हामीले जनताहरुमा चेतना फैलाउनुपर्छ र गुणस्तरीय सामान प्रयोग उपभोग गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो भनेर २०४३ सालमा नै उपभोक्ता मञ्च नेपाल गठन गरेर चेन्जलेवल दुध एकवर्ष सम्म बहिष्कार गर्यौ त्यो पाउडर दुध खाँदा हाम्रो स्वास्थ्यमा हानिकार पुग्छ अन्य जनतालाई सचेत पनि गरायौं त्यतिबेला राजा थिए राजालाई ज्ञापनपत्र पनि बुझायौं त्यसको नेतृत्व उपभोक्ता मञ्च नेपालले गरेको थियो उपभोक्ता मञ्चको अध्यक्ष म नै हो । यसरी जनहितको निम्ति विद्यार्थी आन्दोलन गर्दै सामाजिक चेतनाको लागि संस्था गठन गरेर काम गरेको हुनाले उपभोक्ता मञ्च नेपालको यो प्रतिष्ठा बनेको हो ।
० २०५४ सालमा तपाई उपमेयरको लागि उम्मेदवार पनि हुनुभयो त्यतिबेलाको अनुभव बताइदिनुस त ?
म सबैभन्दा पहिला त्यतिबेला मलाई झण्डै ५५ हजार भोट दिनुहुने सबै महानगरपालिकावासी जनतालाई धन्यवाद दिन्छु । अर्को कुरा समाजमा प्रख्याती कमाउनु र चुनाव जित्नु फरक कुरा रहेछ । समाजमा सेवा गर्दा नाम कमाइँदो रहेछ । सबैले चिन्दा पनि रहेछन् । मान सम्मान पनि पाइन्छ । तर चुनाव जित्नलाई प्राविधिक जोड घटाउ हुँदोरहेछ । त्यतिबेलाको मेरो सोझोपन मेरो पार्टी नेपाली काँग्रेसले उम्मेदवार उठायो पार्टीप्रति कृतज्ञ धन्यवाद गर्छु । म नेपाली काँग्रेसको त्यतिबेला काठमाडौं जिल्ला समिति सदस्य पनि थिए यो सबै हुँदाहुँदै चुनाव जितिन्छ भनेर बसे । तर आफ्नै पार्टीभित्र पनि कोही साथीहरुले जोड घटाउमा लागेर अन्तरघात गरेको कारण मैले चुनाव जित्न सकिन तैपनि थोरै मतले मात्र चुनाव हारे । जनताको जनविश्वास मैले गुमाएको छैन ।
० सामाजिक क्षेत्र र राजनीतिमा जनताले तपाइलाई कसरी बुझेका छन् ?
राजनीतिमा म प्रजातन्त्रप्रति झुकाव राख्ने भएको हुनाले बृहत प्रतिस्पर्धाको पक्षपाति भएको हुँदा राजनीतिमा मलाई सबै नेपाली काँग्रेसका साथीहरुले ढोकाटोलमा फुलेको फुल भनेर मलाई उपमा दिन्छन् ।
सामाजिक क्षेत्रको विषयमा मैले नेतृत्व गरेका संगठनहरुमा मान सम्मान पाएकै छु । अर्को उपभोक्ता मञ्चले गरेको जनहीतको कामले गर्दा जनताहरुको माया, सहयोग, समर्थन पाउँदै आएको छु । हामीले सरकारलाई पटक पटक उपभोक्ता न्यायलय गठन गर भनेर प्रस्ताव पठाएका छौं । तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले ७३ वटा जिल्लामा काम गरिराखेका छौं ।
० उपभोक्ता मञ्चले मूख्य गरेर के के काम गर्छ ?
अघि नै मैले माथि पनि भनिसके उपभोक्ता भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । जस्तै हामीले लगाउने कपडा, उपभोग गर्ने दाल, चामल, नुनतेलदेखि हरेक बजारमा पाइने औषधी सम्म पर्छन् । ती चिजहरु उपभोक्ताको लागि उपभोग गर्न ठिक छ कि छैन समय अवधि गुज्रिएको छकी छैन त्यो जान्न पाउने, चेतना उपभोक्तामा हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले काम गर्दै आइराखेका छौं । कुनै सामानहरुमा मिसावट गरेर स्वास्थ्यमा नै समस्या उत्पन्न हुनेगरी काम गर्न त्यस्ता कम्पनी व्यापारीलाई कारवाही गराउनु पनि उत्तिकै भूमिका खेलेका छौं । त्यसैगरी कालाबजारी गर्न सिन्डिकेटधारीलाई सचेत गराउने कारवाही गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने र भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने काम उपभोक्ता मञ्चले गर्दै आएको छ । यस उपभोक्ता मञ्च आज ७३ जिल्लामा व्यवस्थित ढंगबाट जनहितमा काम गरिरहेको छ । यसको सदस्य संख्या ३ लाख पचास हजार भन्दा बढी रहेका छन् । उपभोक्ता मञ्चको पहलमा २०५४ सालमा उपभोक्ता ऐन लागु भएको छ । यो अर्को उपलब्धी हो । यसरी हाम्रो संस्थाले जनताको हितमा काम गर्दै आएको छ । जुन वस्तु उत्पादन गरिन्छ त्यसलाई उपभोक्ताको हितमा न्यायोचित ढंगबाट वितरण गरिनुपर्छ । जनताले जे चिजको पैसा तिरेका छन् त्यो शुद्ध त्यो चिज, वस्तु उपभोक्ताले पाउनुपर्छ भन्ने शुरुदेखि अहिलेसम्मको लडाई त्यसैमा हो ।
० अहिलेको सरकारले उपभोक्ताहरुलाई गरिरहेको व्यवस्थापन कस्तो लाग्छ ?
अहिलेको सरकारमा बसेकाहरुलाई उपभोक्ता सम्बन्धी ज्ञानै छैन । उपभोक्ता भनेको को ? उपभोक्ता र जनता भनेको एउटै त हो नि, होइन । त्यसैले उपभोक्ता र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । त्यस्तो अहिलेको सरकारले गरिरहेको छैन । किन उदासिनता देखाएको मैले बुझ्न सकेको छैन । हामीले उपभोक्ता अदालत छुटै हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौं । त्यो प्रस्ताव हराएको छ । उपभोक्ताको हितविना जनताको हित हुँदैन जनताको हित गर्न नसक्ने सरकार–सरकारजस्तो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । यतिखेरको सरकार उपभोक्ताको हितमा उदासिन नै छ ।
देश भनेको जनता हो । जनताको हित नगरिकन मुलुक अगाडि बढाउन सकिँदैन । उपभोक्ताको हकहित र उन्नतिको लागि सबै क्षेत्रबाट लाग्नुपर्छ । जनताको हित भयो भने राज्यको विकास हुनसक्छ ।
११ मंसिर २०७५, मंगलवार १९:०१